“Usbuucba ma arkin Ozil oo weli sariir ayuu saaran yahay.”. Wenger uu ka hadlay sababta uu ku maqan yahay kubbad qaabeeyihiisa – Gool FM
“Usbuucba ma arkin Ozil oo weli sariir ayuu saaran yahay.”. Wenger uu ka hadlay sababta uu ku maqan yahay kubbad qaabeeyihiisa
Byare January 4, 2017
(London) 04 Jan 2017. Arsene Wenger ayaa xaqiijiyay in Mesut Ozil uusan weli ku soo dhaweyn inuu dib ugu soo laabto safka hore ee kooxda maadaama uu weli xanuunsan/jiran yahay.
Xiddiga reer Germany ayaan Gunners ka soo muuqan tan iyo kulankii Boxing Day ay 1-0 uga adkaadeen West Brom mana soo xaadirin kulankii xalay ay bar-baraha dirqiga ah ay kooxdiisu la gashay naadiga Bournemouth.
Ozil ayaa lagu dhaleeceynayay bandhigiisa liita kulamadii is xigay ay Arsenal guul darooyinka kala kulantay Everton iyo Machester City taa oo si daran u dhaawacday rajada ay kooxdu ka lahayd Premier League ka hor inta aysan dhibco kale oo dheeri ah xalay ku soo lumin gegada Vitality.
“Usbuuc ma arkin Ozil,” Wenger ayaa sidaa u sheegay Sky Sports ka hor dheesha.
“Go’aan sahlan ayuu ahaa inaan shaxda ku soo darin, weli sariir ayuu saaran yahay.
“Lama heli karo, mana u maleynayo in la heli doono kulanka xiga maadaama uusan waxba sameyn muddo usbuuc ah.”.
Mesut Ozil lama filayo inuu ka soo muuqdo 18-laacib ee loo qaadi dono Preston North wareega saddexaad ee FA Cup usbuucan.
Arsenal ayaa ku soo laaban doonta ciyaarista horyaalka 14-ka Janaayo iyadoo u safri doonta Swansea City.
EPL: Arsenal oo barbaro la soo gashay kooxda Bournemouth oo kaarka cas laga qaatay, kulan lix gool la iska dhaliyey… + SAWIRRO
“Kama careysna isku aadka ee waxay ka careysan yihiin booska koowaad ay Chelsea ku jirto.”. Conte oo ku camirtay tababarayaasha kale